Toekarena sy Fandraharahàna · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Jolay, 2018
Karaiba11 Jolay 2018
Zimbaboe11 Jolay 2018
Maro ny adihevitra tao Zimbabwe nandritra ny herinandro lasa. Resabe tsy misy dikany, izany no misy. Ny fivoarana lehibe indrindra amin'ny vaovao navoakan'ny firenena dia i Gideon Gono, governora mampiadihevitra ao amin'ny banky foiben'i Zimbabwe izay namoaka fanambarana ara-bola efa nandrasana mafy tamin'ny herinandro lasa teo.
Ny zava-nitranga tao Koety
Nankafy ny toetr'andro mahafinaritra i Koety tamin'ity herinandro ity. Marobe ireo olona nanararaotra izany sy nandeha nitsangatsangana tany amin'ny tany efitra.
Karaiba07 Jolay 2018
Polonina: Fanentanana antserasera hiarovana ny zon'ny mpiasa
Eoropa Afovoany & Atsinanana05 Jolay 2018
Ahenan'ny mpampiasanay ny karamanay, ary koa mampanasonia anay fifanarahana arak'asa tsy tena izy, tsy manome anay ny zo fototra tahaka ny fialan-tsasatra isan-taona sy ny andro tsy fiasana rehefa marary
Angola : Nesorina tamin'ny lisitra maintin'ny Vondrona Eoropeana ny zotra an'habakabaky ny firenena
Angola03 Jolay 2018
Rehefa nitsahatra nandritra ny roa taona, nokinasa hanomboka indray tamin'ny voalohany aogositra 2009 amin'ny alalan'ny Boeing 777-200ER ny sidina mampifandray an'i Luanda an'i Lisbonne voalohany ataon'ny TAAG.
Eoropa Afovoany & Atsinanana03 Jolay 2018